GAROWE(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya magaalada Laascaaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in Puntland ciidamo badan ay gaysay qaybo kamid ah deegaanada gobolka Sool, kadib markii ciidamo ku biiray Somaliland oo hore uga tirsanaa Puntland ay la wareegeen degmada Boocame.
Ciidamadani ka tirsan Puntland oo ku qalabaysan gaadiid dagaal iyo hub kala duwan ayaa gaadhay degmada Boocame ee gobolka Sool iyo deegaano kale oo dhaca jiidaha deegaanka Tukaraq oo marar kala duwan dagaalo ay ku dhex mareen ciidamada Somaliland iyo Puntland.
Xubno ka tirsan saraakiisha ciidamada Puntland iyo masuuliyiin kale oo hor kacaya ayaa gaadhay deegaanadaasi, waxaana ciidamadani ka tirsan Puntland ay ka kala baxeen deegaanka Faliidh Yaale iyo magaalada Garowe oo ah caasimada Puntland, kuwaas oo la wareegay markooda iyaguna deegaano hor leh oo Boocame kamid tahay.
Xiisadaha u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland ayaa sii xoogaysanaya, waxaana jira dhaq dhaqaaqyo ciidan halka saraakiisha ciidamada Puntland amar lagu siiyey heegan buuxa si ay hor tagaan weerar kasta oo uga yimaada dhanka Somaliland.
Madaxda Somaliland laftirkoodana waxaa la sheegay in amar ay ku siiyeen ciidamadooda in ay ka hor tagaan dhaq dhaqaaqyada ciidan ee Puntland, taas oo sababi karta xiisad hor leh iyo dagaal ka dhaca deegaanka.
Lama ogaan karo waxa uu xaalku ku dambayn doono, waxaase jira dhaq dhaqaaqyo xoogan halka ciidamadii ka goostay Puntland ee ku biiray Somaliland lagu soo dhoweeyey magaalada Laascaanood oo tababar looga furay si ay uga mid noqdaan ciidamada Somaliland.
DAAWO VIDEO:Khatar Miyuu Ku Leeyahay Soomaliya coronavirus?
Cudur aan la garanayn waxa uu yahay oo ka dilaacay deegaanka Soomaalida